Akoho amam-borona taloha - Fomba Fanamboarana
inona ny famotsorana voajanahary ao anaty vilany eo noho eo
paty lo mein vs patsabe chow mein
mahandro holatra portobello eo am-patana
Akoho amam-borona taloha
Akoho amam-borona taloha dia sakafo ankafizin'ny fianakaviana izay sady mampionona no matsiro! Ity fomba fahandro mora ity dia noforonina avy amin'ny rangotra, ao anatin'izany ny dumplings malefaka sy akoho be ranony amin'ny ron-kena mora vita amin'ny tanana.
Ity fomba fahandro ity dia manomboka amin'ny akoho iray manontolo nopetahana tamin'ny fahalavorariana tamina legioma sy tsiro. Ny dumplings tsotra vita amin'ny akora pantry dia arotsaka ao anaty ron-kena mandra-pahatongan'ny volony sy malefaka. Ity no ankafizin'ny fianakaviana izay angatahina hatrany hatrany!
Ny akoho sy dumplings namboarina dia sakafo mampionona ol tsara indrindra. Raha tiako haingana sy mora Akoho sy dumpling Crock Pot , tsy misy zavatra hafa mitovy amin'ny sakafo iray namboarina tao an-trano.
Ny fanaovana akoho amam-borona taloha sy dumplings avy amin'ny rangotra dia mora kokoa noho ny eritreretinao. Ny ankabeazan'ny fotoana dia lany amin'ny famelana ny ron-kena mandra-pahatonga azy ho matsiro sy ny akoho ho masaka lafatra.
vary volontsôkôlà sy fanosotra amin'ny fomba fahandro lasopy holatra
Ity resipeo ity dia manomboka amin'ny akoho, tongolo ary karaoty nopetahana tamin'ny fatana. Rehefa manao ny ron-kena aho dia misafidy tongolo lehibe ary avelako ny hoditra hanisy loko sy tsiro fanampiny amin'ny ron-kena. Aza misalasala manampy amin'ny anana tianao indrindra toy ny ravina bay, ny zava-manitra manitra amam-borona ary ny persily vaovao. Vantany vao masaka ny akoho dia esorina amin'ny ron-kena miaraka amin'ny legioma.
Tianay ny mihinana ny legioma ho lovia nefa aza misalasala manapaka ny karaoty sy ny seleria ary mampiditra azy ireo ao anaty ron-kena.
Raha efa nanontany tena ianao hoe ahoana ny fomba fanaovana dumplings amin'ny rangotra dia ho tianao ny fomba mora! Raha toa ny olona sasany te-hanao azy ireo amin'ny Bisquick, hitako fa mora ihany izy ireo amin'ny famokarana izay efa anananao ao amin'ny pantryo!
Aza variana loatra amin'ny fanaovana lafatra ny dumplings anao, tsy maninona na ahoana na ahoana ny fanapahana azy ireo. Ny hany zavatra tadiavinao ho azo antoka dia ny famolavolanao ny koba ho 1/8 'eo ho eo. Izany dia manome ny dumplings tsy fitoviana lavorary.
kitapo atsoboka miaraka amin'ny fromazy fanosotra
Amin'ny faran'ny fandrahoan-tsakafo dia tianay ny manamafy ny ron-kena amin'ny vovon-katsaka sy rano kely vantany vao masaka ny dumplings. Afangaro fotsiny ny vola mitovy ary ampio kely isaky ny mandeha mandra-pahatongan'ny ron-kena ny fitoviana tadiavina. Raha tianao ny crothème creamier dia aza misalasala manampy ronono kely na crème mavesatra raha vao masaka ny dumplings.
Fotoana fanomanana30 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo1 ora dimy ambin'ny folo minitra Fotoana manontolo1 ora Efatra Dimy minitra Fanompoana8 servings MpanoratraHolly Nilsson Ny akoho taloha sy ny dumplings dia sakafo ankafizin'ny fianakaviana sady mampionona no matsiro! pirinty Pin
▢1 akoho notapahina
▢3 karaoty lehibe tapaho ny ampahatelony
▢3 stalks seleria tapaho ny ampahatelony
▢8 kaopy ron-kena akoho sodium ambany
▢ravina helodrano na voasarim-borona akoho amam-borona tsy voatery
▢1 ¾ kaopy koba tsara toto miampy fanampiny ho an'ny vovoka
▢⅓ kapoaka fanafohezana
▢½ sotrokely leviora
▢4 tablespoons vovoka katsaka
▢persily ho an'ny haingo
Atambatra ao anaty vilany lehibe ny akoho, tongolo, karaoty ary seleria. Fotoana hanandrana.
Manampia ron-kena. Andrahoy, ahenao ny hafanana, ary apetaho mandritra ny 45-60 minitra na mandra-pitombon'ny akoho. Mandritra ny fotoana misolelaka ny broth, manomàna dumplings etsy ambany.
Esory akoho sy legioma amin'ny ron-kena. Ario ny hoditra sy ny taolana ary teteho ny akoho sisa tavela, atokana.
Ampio moramora mangotraka amin'ny ron-kena. Apetaho 15-20 minitra na mandra-pahalemana.
Atsofohy ao anaty ron-kena ny akoho (sy legioma raha ilaina) ary andrahoy mandritra ny 2-3 minitra na mandra-pahafana.
Atambaro ny lafarinina, ny vovo-pisakafoanana, ny sira ary ny hanafohezana ny saosy mandra-pahatongan'ny hafohy.
Manampia ronono kely isaky ny mandeha ary afangaro mandra-pahatonga azy (mety tsy mila azy rehetra ianao, mila koba malefaka nefa tsy miraikitra).
Mametafeta imbetsaka eo ambonin'ny lafarina misy lafarina mandra-malama ny koba.
Ataovy lafarina tsara ny amboninao ary ahodiho ho lafatra ⅛ ″ ny koba. Hetezo fefy 1 ″ x 2 ″. Asiana lafarinina maloto mba tsy hipikitra.
Andrahoy amin'ny ron-kena araka ny voalaza etsy ambony.
TOHILAHY MASINA (MPIFIDY)
Amboary ao anaty lovia kely ny vina-katsaka 4 sotro fihinanana miaraka amin'ny rano 4 sotro fihinanana.
Ampio am-bava mangotraka kely isaky ny mihetsika, ahetsiketsika hahatratra ny tsy fitoviana tiana.
Karaoty sy seleria azo aroso amin'ny sisiny na voatetika ary ampiana amin'ny ron-kena miaraka amin'ny akoho. Ny fampahalalana momba ny sakafo omena dia tombantombana ary hiova arakaraka ny fomba fahandro sy ny marika amin'ny fangaro ampiasaina.
Kaloria:464,Karbohidraty:32h,Proteinina:26h,Tavy:25h,Tavy voky:7h,Cholesterol:73levitra,Sodium:322levitra,Potasioma:599levitra,Fibre:1h,Sugar:3h,Vitamina A:4060IU,Vitamina C:4.4levitra,Kalsioma:77levitra,Vy:2.8levitra
Teny lakileakoho sy dumplings, avy amin'ny rangotra, namboarina, akoho taloha ary dumplings Mazava ho azyMain course masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Akoho sy dumpling Crock Pot
Casserole Rice akoho 4 ilaina
vilany crock fromazy philly steak dip
Casserole paty akoho mofomamy (avy amin'ny Scratch)